Fanontaniana napetraka matetika i Alphatox
Inona ny atao hoe Alphatox?
Inona ny atao hoe Alphatox? Ny valin-teninao matetika indrindra dia voavaly etsy ambany ary ao amin'ny bilaoginay !
Alphatox dia Orinasa Health & Fitness Lifestyle Company mikendry ny hanampy amin'ny fampiroboroboana taranaka salama amin'ny alàlan'ny fitaovana voajanahary. Mijoro izahay amin'ny filazanay fa ny kalitao no zava-dehibe indrindra mihoatra ny habetsahana. Ny dite misy antsika dia voaforona akora voajanahary 100% voajanahary sy maniry ary fampiasa premium. Izahay dia mikendry ny hampiseho amin'izao tontolo izao fa misy safidy mahasalama sy voajanahary kokoa amin'ny vokatra ara-pahasalamana artifisialy.
ny Ny Domox Tea Deux dia misy akora mikendry indrindra amin'ny fampiroboroboana ny hetsika ny atiny sy ny voa mba hanafaingana ny fanaintainan'ny metabolisma poizina ao amin'ny vatanao, ary koa manentana ny metabolisma sy ny haavon'ny angovo voajanahary.
(Arahina indrindra amin'ny fampiasana maraina nefa mety hitranga amin'ny alina)
(Manjary hatramin'ny in-2 isan'andro) (ny fanjifana fanampiny dia tsy hahazoana valiny fanampiny ary mety tsy takiana.)
ny Ny fivarotan'ny Tea Tea manana fifangaroana tsy manam-paharoa izay novolavolaina mba hampitomboana ny fahasimban'ny lipida (tavy), ary mampiato ny lipidia per-okididia (fomba iray haingana, nefa tena manimba tokoa izay mety hanimba ny tavy ny aty). Mampihena ny fahazotoan-komana koa izy io, ary manampy amin'ny fandevonan-kanina izay miafara amin'ny fihenan'ny lanja.
(Tonga lafatra alohan'ny hatory, tena ambany ao anaty kafeinina voajanahary izay tsy mitazona anao na somary maintso ihany. Manoro hevitra izahay ny hitondra an'io fangaro io amin'ny hariva na dia tsy maintsy atao aorian'ny fampihenana ihany koa!)
(Manjifa hatramin'ny in-2 isan'andro) (Ny fanjifana fanampiny dia tsy hitondra valiny fanampiny ary mety tsy ho takiana.)
Miovaova ny vokatra arakaraka ny antony maromaro toy ny hetsika fihinana sy ny fomba fiaina amin'ny ankapobeny.
Inona avy ireo tombontsoa azo atao amin'ny Alphatox Premium Teas?
Mahazo valisoa tsy fivadihana ve ireo mpanjifa miverina?
Ireo mpanjifa miverina dia mahazo fanomezana sy vokatra azo amin'ny tsy fivadihana. Ary koa ny fampiroboroboana & fihenam-bidy manokana. Azafady mba ampidiro maimaim-poana ny programa valisoa VIP na mpanjifa vaovao ianao na miverina. Hahazo tombontsoa mahavariana ianao!
Impiry aho no tokony misotro ny Alphatox Blends-ko?
Azonao atao ny misotro ny Alphatox anao mandritra ny adiny iray amin'ny andro & araka izay tadiavinao! Manoro anao manokana izahay hisotro kaopy iray isa-maraina, ary kapoaka iray alohan'ny hatorianao mba hahitana vokatra tsara sy haingana indrindra.
Slimming Tea - Fotoana amin'ny alina
Detox Tea - Fotoana maraina
Tea Tea - maraina na mitataovovonana
Dite fatoriana sy fitaintainana - Na oviana na oviana (Tsara indrindra ho an'ny torimaso)
Tea Beauty Beauty - Isaky ny andro (Mety tsara amin'ny tolakandro)
Dite volo - na oviana na oviana
Tea mamelombelona - Isaky ny andro
Immunitea Blend - Na oviana na oviana ny andro
Ny kitapo rehetra sy ny vokatra gummy dia misy torolàlana ao ambadika toy ny pejy bundle raha mikasa ny handroso amin'ny regimen feno ianao.
Hafiriana no mety hahitako ny valiny?
Ny valiny dia miankina amin'ny sakafon'ny mpampiasa sy ny fampihetseham-batana. Ny valiny dia mety samy hafa amin'ny olona tsirairay. Ny ankamaroan'ny olona mifototra amin'ny fanadihadihana dia milaza fa nahita ny famantarana voalohany ny fihenan'ny lanja tao anatin'ny 24-72 ora voalohany fotsiny!
Ahoana no fanomanana ny dite?
Apetaho anaty takelaka 1 mandritra ny rano mangotraka mandritra ny 2-3 minitra. Esory ny teabag / infuser ary ankafizo. (Azonao atao ny mankafy ny tiantsika mafana na mangatsiaka).
Afaka manampy tsirony amin'ny dite Alphatox ve aho?
Na dia mifangaro voajanahary aza ireo fifangaroan-tsika izay manana tsiro mamy voajanahary & mamerovero be. Ny manampy tantely na voasarimakirana dia hevitra tsara foana raha mitady hanova zavatra indraindray. Mbola tsy nitaraina ny mpanjifa momba ny tsiro mifangaro premium izahay ary faly manana izany laza izany!
Inona no atao hoe Tea Detox?
Ny ankabeazan'ny diteo detox dia misy anana mamelona ny aty, taova iray tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana poizina amin'ny vatanao. Ny detoxes dite dia manampy ny vatanao hanary ny fako misy poizina izay manampy amin'ny fanatsarana ny rafi-pandevonan-kanina, manadio sy manadio ny vatanao ary manampy anao hahazo ny tanjon'ny fahasalamana / fihenan-danja.
Fa maninona no tokony hividy Alphatox aho, efa salama sy salama?
Na dia efa afa-po amin'ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny aza ianao, ny fangaro mifangaro dia misy fanafody maro ampiasaina mba hisorohana ireo olana amin'ny ho avy momba ny fahasalamanao. Tsara hatrany ny mamindra ny atinao sy ny voa amin'ny alàlan'ny herin'ny loharano voajanahary rehetra.
Mila manao fanatanjahan-tena ve aho mba hankafizako ny tombontsoa azo avy amin'ny teôphalax?
Tsy mila atleta, bodybuilder, na olympiana ianao mba hankafy ny tombontsoa azo avy amin'ny fifangaroana dite voajanahary voajanahary. Na dia tsara ho an'ireo miasa mavitrika aza ny detox premium sy ny fampihenan-tsakafo, ny teas premium dia afaka mandray soa amin'ny olona amin'ny fomba tsara sy manampy anao hitazona sy hahatratra ny tanjon'ny fahasalamana.
Misy kafe ao aminy ve ny fangaroanao?
Ny kafe rehetra dia misy kafeinina amin'ny alàlan'ny loharano voajanahary. Matetika dia mitovy amin'ny antsasaky ny kaopy kafe, na eo aza ny fangaroharoana dia misy zavatra mifangaro karbôgria sarotra izay tsy hianjera amin'ny siramamy na famoahana kafeinina. Tsy tokony hanana fiantraikany jittery koa ianao!
Inona avy ireo akora azo avy amin'ny Tefiby Alphatox?
Voatanisa ao anaty famaritana ny pejy isaky ny vokatra sy ny ambadiky ny fonosana entana rehetra ny akora. Ny lafiny kosa ho an'ny orsa be dia be, ny saron-tava, ary ny fifangaroan-tsakafo super.
Manana fanontaniana ara-pitsaboana na olan'ny fitsaboana aho.
Tsy tokony hiantehitra amin'ny fampahalalana ao amin'ny http://www.alphatox.com ianao ho safidy iray amin'ny torohevitra ara-pitsaboana avy amin'ny dokotera na mpanome tolotra ara-pahasalamana hafa. Raha manana fanontaniana manokana momba ny raharaha ara-pitsaboana ianao dia tokony hifanontany amin'ny dokotera na mpanome tolotra ara-pahasalamana hafa. Raha mieritreritra fa mety ho marary saina ianao, dia tokony hikarakara fitsaboana haingana.
Ny fampiasana pilina fanabeazana aizana dia mety hisy fiantraikany amin'ny fampiasana anana toy ny Senna hita ao amin'ny tsingerin'ny fihinanantsika. Ny fangaroantsika dia tsy tokony hampiasan'ny vehivavy bevohoka na mampinono. Raha mihinana fanafody ianao na manana aretina, azafady mifandraisa amin'ny dokotera alohan'ny hampiasana an'ity vokatra ity. Ny fifangaroantsika dia tsy tokony holanin'ireo izay manana tosidra ambony na olana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny fo hafa na ireo izay mora tohina amin'ny kafeinina sy / na manaitaitra hafa.
Fandefasana sy fandoavam-bola
Azonao atao ny misafidy ny fomba fandoavam-bola tianao ao amin'ny checkout.
Manaiky fandoavam-bola azo antoka ho an'ny mpanjifa eo an-toerana sy iraisam-pirenena izahay amin'ny alàlan'ny Cards Credit, Cards debit, AfterPay, Bitcoin, & PayPal.
Manaiky fandoavam-bola an-tserasera ihany koa izahay amin'ny alàlan'ny fanamarinana sy fametrahana banky mivantana ao Etazonia mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Tsy manaiky vola amin'ny fandefasana izahay.
Mariho fa isika AZA MITSY INDRINDRA fanampiny sarany fifanakalozana ka hanao izy ireo TSY ampiharo raha toa ka tsy dolara amerikana ny volanao.
Fanampiana amin'ny fametrahana toerana
Ampio fotsiny zavatra maro araka izay irinao ao amin'ny sarety fiantsenana rehefa mizaha ny magazay anay. Raha vantany vao te hanohy ny baiko ianao dia ataovy amin'ny fandehanana any anaty sarety ary kitiho ny "checkout". Araho ny torolàlana amin'ny fanomezana anay fampahalalana momba ny fandefasana ary safidio ny fomba fandoavam-bola ny entana - halefanay ny fonosanao ao anatin'ny iray na 1 andro fiasana.
Azafady, mariho fa ny fihenam-bidyo dia ho hitanao fotsiny amin'ny fizahana, koa aza gaga na diso ianao raha tsy maneho ny fiovana ny saretinao.
Ny ekipa mpanohana anay dia faly mitari-dàlana anao amin'ny dingana rehetra!
Samy mandefa any an-toerana isika (Etazonia) sy manerantany amin'ny firenena rehetra.
Ny kaomandy amerikana amerikana dia mitaky 1-2 andro fiasana hanaterana anao ary alefanay amin'ny andro iasana na amin'ny andro fiasana manaraka ny baiko rehetra mifototra amin'ny ora nanafarana azy.
Ny kaomandy iraisam-pirenena dia mitaky andro fiasana 3-7 hanaterana amin'ny alàlan'ny Carriers USPS, Order mihoatra ny $ 100.00 dia alefa amin'ny alàlan'ny DHL Izay mitaky 1-3 andro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, dia andefasantsika ihany koa ny kaomandy iraisam-pirenena amin'ny andro iray ihany.
Ny fotoana fandefasana dia mety miovaova arakaraka ny toerana, ny fomba fandefasana entana ary ny anton-javatra hafa.
Ny kaomandy rehetra mihoatra ny $ 10.00 USD dia misy fandefasana maimaim-poana.
Ny kaonty latsaky ny $ 10.00 USD dia hoentina halefa amin'ny fandefasana arakaraka ny fomba fandefasana anao sy ny firenena. Hasongadina amin'ny vidin'ny checkout ny vidiny feno. Manomboka amin'ny $ 4.99
Famerenana sy fialan-tsasatra
Ny fahafaham-ponao 100% dia zava-dehibe ho anay. Manolotra antoka momba ny fahafaham-po sy fifanakalozana maharitra 60 andro izahay:
Raha simba ny vokatra iray na simba amin'ny fandefasana azy dia manome 100% famerenam-bola izahay.
Fotoana: manana politikam-bola momba ny Fiverenana sy fifanakalozana 14 andro izahay, hatramin'ny nandraisana ilay entana.
Mba hahafahana miverina, ny entana dia tokony hosokafana, tsy ampiasaina, tsy simba ary miaraka amin'ny porofon'ny fividianana.
Ho an'ny fiverenana, azafady mailaka support@alphatox.com miaraka amin'ny lohahevitra 'Order Returns # xxxxxxx' Ohatra Lohahevitra mailaka: "Order Returns # ATX1099999" ary ampidiro ny nomeraon-kafatra, ny anaranao ary ny anton'ny fangatahana fiverenana na famerenam-bola / fangatahana fifanakalozana.
Hanome torolàlana ny mpanjifa izahay handefasana entana naverina. Ampirisihina mafy ny mpanjifa mba hahazo porofo amin'ny paositra rehefa miverina entana mba hialana amin'ny toe-javatra "fonosana very".
Aza adino fa tompon'andraikitra amin'ny fandefasana ny vidin'ny entana naverina ny mpanjifa.
Rehefa voaray sy voadinika ny entana naverina dia mahazo mailaka fanamafisana ny mpanjifa, mampandre momba ny saran'ny famerenam-bola.
Raha ankatoavina ny famerenam-bola, dia hodinina izy io ary hapetraka eo noho eo ny carte de crédit an'ny mpanjifa na ny fomba fandoavam-bola tsy ela aorian'izay.
Manolotra antoka miverina 14 andro & antoka fahafaham-po 60 andro izahay. Midika izany fa raha tsy mahita valiny avy amin'ny fampiasana ny dite izahay dia hahazo famerenam-bola feno amin'ny volanao!
Mampalahelo fa tsy atolotray ny antoka miverina ho an'ny klioba miverina satria noheverinay fa tamin'io fotoana io dia efa nanapa-kevitra ianao raha toa ny lalao ataontsika.
Ny antoka averinay amin'ny vola dia azo ampiharina hatrany amin'ny $ 39.00 amin'ny baikonao ary ny fividianana mifangaro tokana ihany.
Ny mpanjifa miverina rehetra dia tongasoa hifandray aminay amin'ny alàlan'ny support@alphatox.com ary faly foana izahay mijery ny raharaha na dia tsy mifanentana amin'ny fe-potoam-panompoanay aza ny fangatahanay.
Tsy hitanao izay notadiavinao? Mifandraisa aminay. Laharana fandraisana na rohy
Your Email * Ny anaranao Nomeraon'ny kaomandy Message *